सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नयाँ बानेश्वरमा, राष्ट्रपति पदको निर्वाचनका लागि राजधानीमा ! - Seto Khabar सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नयाँ बानेश्वरमा, राष्ट्रपति पदको निर्वाचनका लागि राजधानीमा ! - Seto Khabar
सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नयाँ बानेश्वरमा, राष्ट्रपति पदको निर्वाचनका लागि राजधानीमा !
काठमाडौँ, फागुन २९ । मुलुकका सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सभामुख, मन्त्री एवं प्रदेशसभा सदस्यहरु आज संघीय संसद् भवन परिसर बानेश्वरमा भेला हुनुभएको छ । संघीय गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा मतदाताका रुपमा भाग लिन उहाँहरु काठमाडौँ आइपुग्नुभएको हो । सो निर्वाचनमा प्रदेशसभाका ५४९ सदस्य मतदाता छन् ।
त्यस्तै संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)का ३३१ सदस्य मतदाता छन् । राष्ट्रपति पदको निर्वाचनका लागि यतिका संख्यामा जनप्रतिनिधि पहिलो पटक राजधानीमा उपस्थित भएका हुन् ।
राष्ट्रपति पदको निर्वाचनका लागि ९ बजेदेखि मतदाता निर्वाचनस्थलमा प्रवेश गरेका थिए भने १० बजे बिहानदेखि मतदान शुरु भइसकेको छ । रासस